दशैँमा सेतो कोटको व्यथा – जनस्वास्थ्य खबर
२६ असोज। घटस्थापनाको दिन । बिदाको दिन । रमाइलो दिन । दशैँ प्रारम्भ हुँदाको तिथि । जमराले अस्तित्व पाउने दिन । खुशीको चाड । उमङको चाड । स्कुल पढ्दाका दिनहरु झल्झल्ती याद आउने कहिलेकसो अचेल ! तम्घासबाट एक दिनको बाटो हिंडेका दिनहरु स्‍मृतिमा अझै ताजा छन् ।
समय बित्दै गए । रितुहरु फेरिदै गए । दशैँहरु आउँदै जाँदै गरे । दसैं त सधैं उस्तै त हो । शरद रितुमा सधैं आउँछ अनि जान्छ पूरा चहलपलसाथ । मेरो लागि न त यो चाड पर सर्छ न त अगाडि । न अरु कसैका लागि । परिवर्तन त केबल आफ्नो अवस्था र परिस्थितीमा हुने रहेछ । ।
“ मिल्दैन ममी । छुट्टी भन्ने हुँदैन । काम छोड्न मिल्दैन । नाइट ड्युटि आदि छन् । तिहार र दशैँमा एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था छ । “ म आफ्नो अवस्था सुनाउँछु ।
दशैँ नजिकिँदै गर्दा यो गतिलो जिनिस पढिएछ जस्तो लाग्दैन हरेक वर्ष । चाडपर्व दिन रात भन्न नपाइने तर सबैलाई सानैदेखि चाखलाग्ने जिनिस रहेछ ” डाक्टर “ । रहर लागेर नै पढेको हो । अब जे छ त्यसलाई आत्मसात गर्नुको बिकल्प त छैन।
छोराछोरी डाक्टर भयो भनेर खुशी हुने मनहरु कति धेरै छन् । चाडपर्व आउँदा मलिन हुन्छन् । तर अरुले लगाएको जुत्ता कत्तिको सजिलो छ भन्ने कुरा आँफै नलगाएसम्म बुझ्न् सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । कागजमा मात्रै मिति मिलाएर ड्युटि गर्न नमिल्ने । के गर्नु ? न दशैँको ड्युटि पछि गर्दिन्छु भनेर हुने । दशैँमा नागरिकता नबाँडे पनि हुन्छ । प्रशासन बन्द भए पनि केही फरक पर्दैन । । बैन्क पनि बन्द भए हुन्छ । केही दिन ढिला भएर केही हुँदैन । तर दशैँमा मान्छे बिरामी हुन्नन् भन्ने छैन । सिकिस्त हुदैनन् भन्ने पनि छैन।
…………. “ के छ बाबु । आउने भइस् । “ बुवाको फोन आउँछ ।
“ त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ । यतिका महिना भइसक्यो । दशैमात आउन पर्‍यो । ब्यक्तिगत जीवन मिलाउन नसके त सन्तुलन बिग्रिन्छ । “ दिब्यज्ञान दिन खोज्दै हुनुन्छ बुवा ।
“ अब नमिल्ने कुरामा के कुरा गर्नु । ९९ प्रतिशत म आउन सक्दिन ,बुवा । आदि…….. “ म भन्छु निराशाका साथ । ..”……….. ।
फिल्टर भएर बचेको थोरै मूल्यवान समयको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर चिन्तन गर्छु बेलामौकामा । अन्तर सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ला भन्ने सोचले मनप्रिय साथीलाई सम्झिएँ । उनी पनि ब्यस्त छिन् अचेल । फिल्टर भएको समयमा मलाई कतै अटाउँछिन भन्ने आस छ । इष्टमित्रलाई सम्झिएँ । शुभकामनाका शब्दहरु उपहारस्वरुप पठाएँ । शब्दहरुमा खेल्ने प्रयास गर्दै छु । कनिकुथी शब्दहरु टपक्क टिपेर लेख्ने प्रयास गर्दै छु । । यसपटक दशैँमा म रमाउँदै छु । कलम ,आला, सेतो कोटका साथमा । समयसँगै बोध हुँदैछ ” मानव सेवा नै भगवानको सेवा । विजया दशमीको शुभकामना ।
साभार डा. शम्भु खनालको ब्लग बाट
Related Topics:dr shambhu khanal janaswasthyakhabar swasthyakhabarFeatured